Kaleessa Anatu Boo'e Har'a Situ Boo'a!! - Xalayaa Jaalalaa
Kaleessa Anatu Boo’e Har’a Situ Boo’a!!
19 Feb 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Kaleessa natu boo’e har’a situ boo’a
Maal haa godhu? Akka kee osoo hin ta’in akka Waaqa laale nagaan yoon eegale naa wayya. Akkam jirta? Nagaa keeti?
Gocha atii narratti raawwatte yoon laale, waa’e kee mitii maqaa kee dha’uyyu baayye naqaanessa! Tari, ati maal akka nagoote hin dhagatta ta’a. Kanaaf Oromoon, kan waraane dhagatuus kan waraaname hin dhagatu jedha. Maqaa kee gaari sanaan gocha badaa akkanaa yoomun Giifti jedhee bakka siif buuse. Goochonni kaleessa wajjiin dabarsine hardha kuno seenaa ta’e yoon siif himu akka qalbiin nadhaggeefattu abdiin qaba. Yoo ta’u baates namoonni akka kiyyaa onnensaani madoofte irraa baratu jedheen yaada.
Aniif ati, hallayyaa jaalalaa keessa seenne wagga lamaaf waliin dabarsine. Akkuma beektu yeroo sana gufuu jaalalaa nurukutaa turteef, obsaati korsaan wajjiin dabarsaa qorumsa kutaa kurnaffaa fudhanne. Ta’us anaan qaphtiin koo kophaa’ina na seensisee kutaa 11ffa fi 12ffaa yeroon baradhu obsaan na eegde wajjiin jiraata turre. Yeroo ani gara Yuniversitii deemu boo’ichan nagaggeesite garaa koo naballeesitee obsa nadhorkite. Baatii hedduu dhaaf nyaataf dhugaati wallaale.
Utuu kanaan jiru, oduu haara tokko bilbiltee natti himte. Kuniis, akka abbaan kee si heerusmsiisu barbaadu fi akkan furmaata itti kennu natti himte. Yeroo sana waanan godhu dhabe. Lafatuu nan maree. Hiriyoota kiyya mari’adheetan furmaata tokkon argadhe. Innis, akka abbaan kee biyyaa arabaa si ergu. Atis tole jettee fudhattee abbaa kee amansiiste gara biyya alaa qajeelte. Har’as imimmaan keenya hin qoorre. Halaala wal yaadu eegalle waliif dheebonna ture.
Turtii waggaa tokko booda amalli kee inni duraani hin jijjiirame. Naaf bilbiluu dhiiste. Ani immo yoon siif bilbilu yoo barbaadde najala hin kaastu yoo kaastu natti qoosta. Osoo akkasitti jirru, odeefanno ati nama biyyaa araba keessatti kaadimachuu akka barbaaddu dhaga’eetan sigaafannaani “eeyyee dhugaa dha” nan jette. “Kana booda buddeeni kiyyaaf kee gargar ta’e jira” nan jette. Baayye rifadhe bakkan jiruu wallaale jireenyis natti dukkanaa’e waanan du’e of se’eetan gorsa hiriyoota kiyyaan of jajjabeessen cal jedhee barumsa kiyya baradhe. Waa’e kees nan dhagadhe.
Jijjiramni yeroo waan fidu hin beekamu jedhama mitii ree? Rabbiin waan ol kaasu gadi buusu isaa hin hafuu jedhama miti ree? Baqatoonni biyyaa arabaa keessa jiran akka biyyatti deebi’an kan jedhu mootumman arabaa labsii baase. Jaalallee keetis biyyatti deebi’e. Atii ammo seera qabeessan baate waan ta’ef achuma jirta.
Jaalallee kee galuusa erga hubatte anaan ergaa gabaaba dhan jaalala kaleessa eegalla nan jettee natti boo’a jirta. Kaleessa natu boo’e har’a situ boo’a. Anaan keessi koo na madaa’eera. Kana caala barreesse hin danda’u. Garuu, akkan sin barbaanne sitti himuun barbaada. Gaafa hiikan jaalalaa siif gale haasofna.
Mohammad Ganamoo, Yuniversitii Sayansi fi Teknolojii Adaamaarra. Jaalallee koo durii biyya Arabaa kan argamtufi.
waan hedduu nama maaraaru
baayye namatti tolaa jabaadhu
kankoo natti fakkaate
I have noticed you don’t monetize xalayaa.com, don’t
bayee namatti tola
Jaalallii isa beekuuf jireenyaadha isa hin beekneef garuu….. qoosadha.